टिकटक क्वीन दिदीबहिनी देखेर पल र प्रमोद भुतुक्कै (भिडियो सहित) - VOICE OF NEPAL
टिकटक क्वीन दिदीबहिनी देखेर पल र प्रमोद भुतुक्कै (भिडियो सहित)
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १४:०६ 395 ??? ???????
टिकटकबाट राम्रो फ्यानफलोईङ कमाएका प्रिस्मा र प्रिन्सीले दोस्रो कामको रुपमा चर्चित एवं लोकप्रिय गायक प्रमोद खरेल र लोकप्रिय नायक पल शाहसंग काम गर्ने मौका पाएका छन् । प्रमोदको आवाजमा रहेको नयाँ गीत “झुमा झुमा” को भिडियो आज सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा भिम बिसीको संगित , हिमांशु रायमाझीको शब्द र उदय राज पौडेलको एरेन्ज रहेको छ । सार्वजनिक गीतमा जुम्याहा दिदी बहिनी प्रिस्मा र प्रिन्सी खतिवडाले लोकप्रिय नायक पल शाहसंग स्क्रिन सेयर गरेका छन् । शुभम भुजेलको कोरियोग्राफीमा प्रिस्मा र प्रिन्सीले गायक प्रमोद खरेल र पल शाहलसंग जोडी बाधेका हुन् ।
सार्वजनिक गीतको भिडियो फिल्मी शैलीमा निर्माण भएको छ । भिडियो भद«गोलका कलाकार एवं निर्देशक दिपक आचार्यको निर्देशनमा बनेको छ । प्रिस्मा र प्रिन्सीले यसअघि “हाम्रो माया जिन्दावाद” मा पहिलो पटक काम गरेका थिए । उक्त भिडियो यति हिट भन्यो की लोभ लाग्दो भ्युअर्स कमाएको थियो । पछिल्लो समय टिकटकबाट नै चर्चामा आएका प्रिस्मा र प्रिन्सी एक पछि अर्काे गर्दे भिडियोमा देखिन थालेका छन् ।